Sharci cusub oo degmooyinka ku khasbaya in ay qaabilaan qaxooti - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sharci cusub oo degmooyinka ku khasbaya in ay qaabilaan qaxooti
La daabacay tisdag 1 mars 2016 kl 10.11
Sidii aan shalay idinla socodsiinay, laga bilaabo maanta, 1 mars ayey ku khasbanyihiin degmooyinka waddanku in ay qaabilaan magangalyadoonka Iswiidhan sharci ka helay.
Sannadkan ayaa 21 700 qaxooti loo kala qeeybinaya degmooyinka waddanka, tiradan ayaa saddex- laabantay marka loo barbardhigo sannadkii hore, 2015.
Tusaalahan ayaa degmooyinka shaqooyinku ka jiraan, hasayeeshe dadkan hore u qaabilin khasab lagaga dhigaya in ay masuuliyadooda qaatan. Vaxholm, Staffanstorp, Vallentuna, Vellinge, Lomma iyo Kungsbacka ayaa ka mid ah degmooyinka ay qaxootigu ku yaryihiin.
Sharciga cusub ayaa Kungsbacka ku khasbaya in ay 318 qof qaabilaan, halkey Vellinge qaabili doonto 159 qof.
Mats Gerdau ayaa ka tirsan xisbiga moderaterna, ahna hogaamiyaha goolaha degaanka ee degmada Nacka. Degmadan ayaa sannadkan saddexlaabaysa intii qaxooti ay qaabilayaan, marka loo barbardhogo sannadkii hore.
-Umaleeyn maayo in aanu dadkan wada qaabili karno sannadkan. Sido kale degmooyinka ka mid ah gobolka Stockholm. Hadii ay dawladdu is leedahay in u sharcigan cusubi wax nugu soo kordhinayo, khalad ayey fahmeen. Waddanka guryo l´aan ayaa ka jirta, ayuu sheegay.
Maamulka gobolada waddanka ayaa u jeeda in ay ku adaktahay degmooyinka in ay wada qaabilaan inta qaxooti u sharciga cusubi ku khasbayo.
34 000 ka mid ah qaxootiga sharciga helay ayaa lugu khasbaya in ay keligood guri raadsadaan. Sharciga cusub ayaa sheegaya in degmooyinka dadkan qaabilay laga deeynayo in ay qaaxoti kale qaabilaan. Tusaalahan Södertälje iyo Östra Göinge.
Dhanka kale ayey caruuraha kelinimada ku timaada ku jirin sharciga cusub. Mid iyaga u gaar ah ayaa la soo bandhigaya 1 bisha april sannadkan.
Kuwaan ayaa u baahan in 40 000 oo guri lugu meeleeyo. Hasayeeshe ayaa maanta gacanta lugu haya 22 000 oo guri.
Ylva Johansson, wasiirada suuqa shaqada, ayaa sheegtay in ay la socoto guri l´aanta ka jirta degmooyinka waddanka, hasayeeshe wexey aaminsantahay in ay degmooyinku arrinkan xal u heeli doonaan.